Ukuhamba komuzi nokubuka indawo nge-Transfer Service Basel -
Akukona nje amaklayenti ethu ebhizinisi - nemindeni namaqembu kuze kube yi-7 abantu - sinikeza ithuba lokuhamba ukhululekile kwelinye lethu limousines ezinhle futhi ezinhle on.
Ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo, iBasel idonsela abavakashi abaningi abafuna ukuthola imizi ezungezile eSwitzerland, eFrance naseJalimane. Ngenxa yendawo yethu enhle kakhulu singenza uhambo lwakho lomuzi lukhululekile ngangokunokwenzeka. Amaklayenti amaningi ebhizinisi lethu ajabulela ithuba lokuhlanganisa ibhizinisi ngobumfihlo futhi aqondiswe abaqondisi abanokuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho ukucindezeleka kwebhizinisi kanye nokuhlolwa komphakathi, hhayi nje izinto, kodwa amathiphu ambalwa angaphakathi bonisa.
Isevisi ye-Limousine yezinkambo ezihamba kahle emadolobheni aseYurophu
Umshayeli wethu akuqondisi nje ngokunethezeka, kodwa futhi ngokugcina isikhathi, ngokuhlakanipha nangokuphepha lapho uya khona. Kusukela e-Basel, indawo ehlukahlukene eya endleleni edolobheni ozikhethelayo ibhekwe kahle kakhulu.
Thola i-Zurich kusuka kumalousine
Iqanda Ungakwazi ukuchitha kahle ukushayela ihora elilodwa ukusuka eBasel kuya eSurich kwelinye lamaLimousine ethu aseJalimane. Ngaphandle kwemigwaqo ephakathi edolobheni langaphambili laseRoma, isakhiwo samanje kunazo zonke e-Europaallee kanye neqoqo elikhulu lomlando wamasiko eSwitzerland likulindele lapha enqabeni yezintambo ze-Landesmuseum Zurich. Okokugcina, iwindi eyaziwa emhlabeni wonke eyaziwa yiChagall ifasitela eFrauenmünster eZurich ayikhohlwa yibo bonke abavakashi.
Ungathanda ukuhlanganisa uhambo lwakho lomuzi oluya eZurich nge-extensive shopping experience? Umbono omuhle! I-Zurich ithandwa yizivakashi ezivela emhlabeni wonke ezitolo zayo ezikhethekile, izitolo ezikhethekile kanye nezitolo zabaqambi abaphezulu. Phakathi kwabanye uChristia de Carouge, i-Fabric Frontline, uHannes B. noKönix basekhaya lapha futhi beza nomklamo wokugqoka, izingubo zangaphansi nezicathulo. I-Casino yaseSwitzerland eZurich iyamangala ngokulandela izenzakalo ezithakazelisayo nemidlalo ehlukahlukene kanye ne-tournaments. Futhi abalandeli bebhola elikhulu nabancane, uZurich ukumema kwi-FIFA World Football Museum.
Uhambo oludolobheni oluya eM Mulhouse Ville e-limousine
I-Mulhouse yesiFulentshi - isigamu sehora elilodwa nje ukusuka eBasel - amasheya neBasel neFreiburg yizindiza ze-EuroAirport international. Amakhasimende ethu amaningi ebhizinisi asebenzisa njalo inkonzo yethu yokudlulisela esuka eBasel Airport kuya endaweni yebhizinisi eM Mulhouse Ville e-Alsace. Idolobha edolobhaneni elisemngceleni lithathwe ikakhulukazi ku-18. Ikhulu leminyaka njengephayona lezinguquko zezimboni zaseFrance namafektri alo asemqoka kakhulu. Ngabasebenzi abangaphezu kuka-10.000, uPegegeot ungumqashi omkhulu kunazo zonke e-Alsace. I-Mulhouse Ville iyamangaza ngokungafani okungapheli kokunye phakathi kwezikhumbuzo zezimboni zezimboni kanye namasonto asendulo kanye nemiyalo yezindela, i-Fabric Printing Museum kanye neDown National Museum Cité de l'Automobile.
Ngaphezu kwamadolobha aseSwitzerland, eJalimane naseFrance, nathi siyakuthambisa kwamanye amadolobha. Uzothola uhlu lwezindawo ezikhethiwe kuwebhusayithi yethu, lapho uzothola khona amanani okudluliselwa kwezindiza. Sibheke phambili ezakho Online yokubhuka noma ikholi yakho ku-41 78 861 35 50.
Kubhalwe ku: I-Airport shuttle Basel sezindiza Shuttle isevisi Limousine amakhefu idolobha
taxi.flughafen April 6, 2017 April 6, 2017 Ukukhangisa Awekho amazwana
← I-BASELWORLD 2018 - Hamba ukhululekile nge-Transfer Service Basel